Home Wararka Farmaajo oo ka horyimid go’aankii Rooble, amar cusubna siiyay ATMIS
Farmaajo oo ka horyimid go’aankii Rooble, amar cusubna siiyay ATMIS
Farmaajo ayaa jawaab adag ka bixiyay amarkii uu soo saaray Rooble, sooona saaray mid burinaya kii Rooble caawa uu soo saaray. Labadaan qoraal ee iska soo horjeeda ayaana xaalad cusub galisay howlaha doorashooyinka dalka.
Halkaan ka aqriso qoraalka Farmaajo soo saaray:
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu arkay dhacdooyinkii u dambeeyay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo baahida loo qabo dhammeystirka doorashada Guddoonka Golaha Shacabka, wuxuu Madaxweynuhu adkeynayaa qodobbadan;
1. Sida ku cad habraacyadii ay ku heshiiyeen Madasha Wadatashiga Qaran, Guddiga Amniga Doorashada oo uu Guddoomiye u yahay Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, ayaa masuul ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka. Sidaas darteed, Hawlgalka ATMIS wuxuu ku shaqeynayaa hannaanka u degsan amniga doorashooyinka oo uu hormuudka u yahay Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
2. Golaha Shacabku waa hay’ad astaan u ah mataaladda iyo madaxbannaanida shacabka Soomaaliyeed. Amniga xarumaha ay ku shaqeynayaan waxaa masuul ka ah Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
5. Madaxweynuhu wuxuu adkaynayaa in la dardargeliyo doorashada Guddoonka Golaha Shacabka, wuxuuna ka digayaa falalka lidka ku ah Heshiiskii 17-ka Sebteembar iyo habraacyadii ku lifaaqnaa oo ay Madashu ku heshiisay.
6. Sida ku cad wareegtadii uu Madaxweynuhu 22-kii Abriil 2022, ka soo saaray doorashooyinkii is barbar socday ee Gobolka Gedo, Xildhibaannada lagu soo doortay Degmooyinka Garbahaarey iyo Ceelwaaq kama qeyb gali karaan doorashada iyada oo aan la helin heshiis ay wadar-oggol u gaareen Madasha Wadatashiga Qaranka si waafaqsan Heshiiskii 17-ka Sebteembar 2020, ama uusan Barlamaanka 11-aad soo saarin sharci wax ka baddalaya xeerkii Barlamaankii 10-aad labadiisa Aqal ay horey u wada ansixiyeen.
Previous articleRooble oo amar deg deg ah siiyay hawlgalka nabad iIaalinta ATMIS
Next article(Sawiro) Karaash oo caawa Gaalkacyo kulamo la xiriira amniga kula yeeshay saarkiisha ciidanka
Dabageed: “Farmaajo iyo aniga waa nala heshiisiiyay.. isku-weel aana wax ku...